Nepal Auto | गुणस्तरमा सचेत उपभोक्ताले इनोक नै प्रयोग गर्छन्
गुणस्तरमा सचेत उपभोक्ताले इनोक नै प्रयोग गर्छन् 12 Ashwin, 2075
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल इल्भर ट्रेडिङ प्रालि
इनोक लुव्रिकेन्ट्सको पहिचान कसरी गराउनुहुन्छ ?
इनोकको पहिचान भनेकै गुणस्तर हो । यसमा हामीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्झौता गरेका छैनौ । गुणस्तरका हिसावले भन्नुपर्दा हामी नम्वर वान पोजिसनमा छौ । हाम्रो जत्तिको गुणस्तरिय लुव्रिकेन्ट्स अन्य ब्राण्डमा उपलव्ध छैन । जुन कुरा हामी प्रमाणका साथ भन्न सक्छौ ।
त्यस्ता के–के प्रमाणहरु छन् ?
पहिलो र एकदमै भरपर्दो प्रमाण भनेको एपिआई सर्टिफिकेसन नै हो, जुन हामीले पाएका छौ । अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युटले उपलव्ध गराउने उक्त प्रमाणपत्र इनोकका हरेक उत्पादनले पाएका छन् । त्यसैले हाम्रो हरेक उत्पादनमा एपिआइको डोनट अनिवार्य अकिंत गरिएको हुन्छ । अर्को प्रमाण हो विश्वको जुनुुसुकै राष्ट्रमा पनि समान गुणस्तरको लुव्रिकेन्ट्स उपलव्ध हुनु । कम्पनीको दुवईस्थित प्लान्टबाट उत्पादन भएको लुव्रिकेन्ट्स नै विश्व बजारमा निर्यात हुँदै आइरहेको छ । जसका कारण विश्वको जुनसुकै राष्ट्रमा उपलव्ध हुने उत्पादनको गुणस्तरमा एकरुपता कायम हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण भनेको हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा चलेका पछिल्लो ग्रेडका इन्जिन आयल आयात गरी कारोवार गरिरहेका छौ । जस्तो डिजेल इन्जिनका लागि भनेर इनोकले २ बर्षअघि नै सिके–फोर ग्रेडको इन्जिन आयल बजारमा ल्याएको थियो । जुन ग्रेड आजका दिनसम्म कुनैपनि ब्राण्डसंग उपलव्ध छैन । सिके फोरमा जाने उनीहरुले सोचसमेत नबनाएको समयमा इनकोले उक्त ग्रेडको इन्जिन आयल कारोवार थालेको हो । जुन उत्पादनलाई हामीले पनि २ बर्षदेखी बजारमा कारोवार गरिरहेका छौ ।
सिके फोरको खास विशेषता के–के हुन् ?
डिजेल इन्जिनका लागी विश्वकै लेटेस्ट प्रविधी हो । साना देखी ठूला सवै प्रकारका इन्जिनमा यो इन्जिन आयल प्रयोग गर्न सकिन्छ । एपिआईले अध्यान गरेर डिजेल इन्जिनका लागी सिके फोर हालसम्मकै उत्कृष्ट छ भन्ने सुचना दिनेवित्तिकै इनोकले यो ग्रेडको इन्जिन आयल उत्पादनमा हात हाल्यो र एपिआईले लन्च गरेकै दिन विश्व बजारमा उक्त ग्रेडको इन्जिन आयल सर्वाजनिक गर्न सफल भयो । पर्फमेन्स पूर्ण सिन्थेटिक सरहको दिने भएपनि मुल्य भने झन्डैले आधा सस्तो छ ।
यो उत्पादन इनोकसंग मात्र भएको हुँदा प्रतिस्पर्धी नै छैन । अन्य ब्राण्डले लेटेस्ट भन्दै सिआई फोर प्लस भर्खरै सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जवकी उक्त उत्पादन हामीसंग आजभन्दा ६ बर्षअघि देखीनै बजारमा उपलव्ध थियो । यसले पनि गुणस्तरका मामिलामा इनोक अन्य ब्राण्डभन्दा एककदम अगाडी नै छ है भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
शुरुवातमा टु ह्विलर सेग्मेन्टबाट कारोवार थालेको इनोकको बजार अहिले कुन कुन सेग्मेन्टमा विस्तार भइरहेको छ ?
हो हामीले शुरुवातमा टु ह्विलरबाटै कारोवार शुरुवात गरेका थियौ । केहीसमय टु ह्विलरमै कारोवार केन्द्रित गरेपछि विस्तारै फोर ह्विलरमा गयौं । त्यपपछि चरणबद्ध रुपमा कर्मसियल, हेभी कर्मसियल र इन्डस्ट्रियलमा समेत कारोवार गरिरहेका छौ ।
अहिले हामीसंगै सवै रेन्जाका लागी आवश्यक पर्ने लुव्रिकेन्ट्स उपलव्ध भएपनि पछिल्लो समय बजारमा विकृतीहरु बढ्दै जान थालेपछि प्राथमिकताका आधारमा सेग्मेन्टअनुसार कारोवारको रणनितीमा भने केही परिवर्तन गरेका छौ । अहिले हाम्रो प्राथमिकता फोर ह्विलर, कर्मसियल, हेभी कर्मसियल र इन्डस्ट्रिमा बढी छ । यी सवै सेग्मेन्टमा हाम्रो उत्पादन खपत भइरहेको छ ।
लुव्रिकेन्ट्स बजारमा कस्तो विकृती छ भन्न खोज्नुभएको ?
नेपालमा कारोवार हुने धेरैजसो लुव्रिकेन्ट्स ब्राण्डले अहिले गुणस्तरमा जोड दिनुको सट्टा स्किम, उपहार र अफरका नाममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन लुव्रिकेन्ट्स बजारमा देखीएको सवैभन्दा ठूलो विकृती हो । लुव्रिकेन्ट्स जस्तो संवेदनशिल पदार्थको गुणस्तरमा सवैभन्दा बढि जोड दिइनुपथ्र्यो तर यहाँ त्यसो नभएर सवैजसो पक्ष क्षणिक लाभका पछि कुदिरहेका छन् ।
सोही कारण राम्रा उत्पादन पछि धकेलिंदै गएका छन् भने कमसल गुणस्तरका उत्पादनले बजार पिटिरहेको अवस्था छ । जुनदिन उपभोक्ता गुणस्तरका सवालमा सचेत हुन्छन् त्यसदिन यस्ता विकृती स्वत हट्ने अपेक्षा सहित हामीले आफ्नो कारोवार अघि बढाइरहेका छौ । गुणस्तरका सवालमा चासो राख्ने उपभोक्ताले यस्ता विकृतीका पछी नलागी निर्धक्कका साथ इनोक लुव्रिकेन्ट्स नै प्रयोग गरिरहेको हामीसंग प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
इनोक नेपाल भित्रिएको एक दशक भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि यसको बजार काठमाडौं लागयत केही सहर वाहेक अन्यत्र विस्तार हुन किन सकिरहेको छैन ?
हो हामीले देशका सवै कुनाकाप्चामा यसको बजार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौ । यसो भनिरहँदा हाम्रो उत्पादन काठमाडौंमा मात्र सिमित छ भन्ने पनि होइन । बजारको अध्ययान गरेर कुन स्थानमा हाम्रो उत्पादनले बजार लिन सक्छ भन्ने आधारमा कारोवार गरिरहेका छौ । हाम्रो उत्पादन गुणस्तरिय भएको कारण अन्यको तुलनामा केही महंगो छ । जसका कारण सस्तो खोज्ने र गुणस्तरका सवालमा सचेत नभएका स्थानहरुमा हामीले कारोवार केन्द्रित नगरेकै हो ।
त्यस्ता स्थानमा बजार विस्तार गर्न अहिले समय अनुकुल छैन । विस्तारै अनुकुल हुँदै गएपछि हामी पनि आक्रमक भएर लागी पर्छौ । तर इन्डस्ट्रिको हकमा भन्ने हो भने अहिले नयाँ र अत्याधुनिक मेशिन भित्रिने क्रम बढीरहेको र यस्ता मेसिन आयत गर्ने व्यक्तिहरु गुणस्तरका सवालमा समेत सचेत हुने हुँदा यो क्षेत्रमा इनोक लुव्रिकेन्ट्सको माग दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । उपभोक्ताहरु गुणस्तरमा सचेत हुने क्रमसंगै हाम्रो बजार पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ ।
कतिपय अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डका लुव्रिकेन्ट्स माग अनुसारको प्याकिङमा उपलव्ध नभएका कारण पनि समस्यमा पर्ने गरेका छन् । इनोकको हकमा के छ ?
यो बिषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो अभ्यासमा ठूलो फरक छ । जस्तो कुनै पनि टु ह्विलर, फोर ह्विलर अर्थात कर्मसियलमै किन नहोस सवै उत्पादनमा प्रयोग हुने लुव्रिकेन्ट्समा राज्यको निगरानी हुन्छ । गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने भन्ने सवाल नै हुँदैन । ति देशहरुमा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार ठूलो ड्रमबाट समेत इन्जिन आयल झिकेर आवश्यकता अनुसार निर्धक्क प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । तर हाम्रोमा विश्वासको अभावका कारण यस्तो प्रचलन आइसकेको छैन । जसका कारण ग्राहकले पनि आवश्यकता अनुसारकै प्याक खोज्छन् ।
जति ठूलो प्याकमा ल्याएपनि यदि सामान गुणस्तरिय छ भने त्यसलाई आवश्यकता अनुशार प्रयोग गर्नु मुल्यको हिसावले समेत किफायती हुन्छ । जति सानो प्याकमा आयो त्यत्तिनै त्यसको मुल्य बढ्ने हुँदा विदेशका उपभोक्ताहरु यो मामिलामा बढी नै सचेत छन् । उनीहरुको सोचाई नै कसरी हुन्छ कम मुल्यमा राम्रो माल प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा यसको ठिक उल्टो छ । नेपाली उपभोक्ताको यस्तो मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले पनि बढीभन्दा बढी प्याकिङ साइजमा इनोक लुव्रिकेन्ट्स उपलव्ध गराइरहेका छौ ।
अहिले प्राय सवैजसो सवारीसाधन आयत गर्ने कम्पनीले आ–आफ्नै ब्राण्डका इन्जिन आयल समेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कारोवार कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
हो अहिले नेपालमा यस प्रकारको प्रवृति निकै नै बढेर गएको छ । सर्भिस र वारेन्टिका नाममा कम्पनीहरुले आफूमार्फत कारोवार हुने इन्जिन आयल मात्र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई बाध्य पारिरहेका छन् । यो एकदमै गलत ट्रेन्ड हो । यसले उपभोक्ताको गुणस्तरिय र आफूले चाहेको उत्पादन छनोट गर्ने अधिकार त हनन भएको छ नै साथमा जेन्युन आयलको नाममा चर्को मुल्य असुली उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम समेत भइरहेको छ ।
यदि कुनै इन्जिन आयलले सम्वन्धित सवारीसाधनको इन्जिनको मापदण्ड पुरा गरेको छ भने उक्त इन्जिन आयल जुनसुकै ब्राण्डको भएपनि निर्धक्क प्रयोग गर्ने बातावरण बनाइनुथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । वारेन्टिको नाममा उपभोक्तालाई तर्साएर जवरजस्ति आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्ने ट्रेन्डका कारण खुल्ला बजारमा उपलव्ध हुने इनोक जस्ता लुव्रिकेन्ट्सको बजार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको महशुस हुन थालेको छ । यसले उपभोक्ताको अधिकार समेत हनन भएको छ । यस विषयमा उपभोक्ता बढी चनाखो हुनुपर्छ ।
अटो भिलेजलाई धुलो मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रयासमा छु : अध्यक्ष सन्तोष पाण्डे
२०३२ सालमा रुपन्देहीको भैरहवामा जन्मिएर लामो समयदेखि बुटवलमा व्यवसाय गर्दै आएका...